Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America oo jawaab cad ka bixiyay hadallada Lionel Messi – Gool FM
(Brazil) 07 Luulyo 2019. Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America ayaa jawaab rasmi ah ka bixiyay hadallada Lionel Messi, kaddib markii uu qaatay kaarka casaanka ah kulankii ay xalay wada ciyaareen xulka qaranka Chile.
Messi ayaa u jeediyay dhaleeceeno xoogan Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America, wuxuuna ku eedeeyay inuu yahay mid musuq ka sameysan.
Hadaba Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America oo jawaab rasmi ah ka bixiyay hadallada Lionel Messi ayaa wuxuu yiri:
“Kubada cagta, waxaa jira guul iyo guuldaro, iyadoo sharciyada ugu muhiimsan uu qeyb ka yahay ciyaar wanaaga, taasoo aad ku aqbali karto natiijo kasta si daacadnimo iyo ixtiraam leh, Isla sidaas waxaa lagu dabaqayaa go’aamada garsoorka, taasoo ah bini-aadaminimo, iyadoo mar walba ay tahay arrin aad u fiican”.
“Dacwado aan macquul ahayn isla markaana aan runta ku saleysneyn, taasoo su’aal galineysa sumcadda tartanka Copa America, waxayna ixtiraam daro ku tahay tartanka iyo dhamaan ciyaartoyda ku lug leh iyo sidoo kale Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America ee si xamaasad leh u soo shaqeynayay tan iyo 2016, si kubadda cagta ee koonfurta America ay u noqoto daahfurnaan iyo xirfad”.
Dhinaca kale Xiriirka kubadda cagta ee Argentina, uu hoggaamiyo Claudio Fabián Tapia ayaa waxay ku jiraan lineka, waxayna ku baaqeen is casilaada guddoomiyaha guddiga garsooreyaasha ee Xiriirka kubadda cagta koonfurta America Wilson senem iyo sidoo kale Hugo Figurado oo ah gudoomiyaha tartamada xulalka hoos taga Xiriirka kubadda cagta ee koonfurta America.